बिएन्डसीमा क्यान्सरको सफल शल्यक्रिया
सुरुङ्गा–झापा । बिर्तामोडस्थित बिएन्डसी अस्पतालमा एक महिलाको जटिल प्रकारको अर्बुद रोगको सफल उपचार भएको अस्पतालले जिकिर गरेको छ । कनकाई नगरपालिका– ३ निवासी ३८ वर्षीया मनमाया श्रेष्ठको पित्तको नली, प्याङ्क्रियाज ग्रन्थी र ड्युडेनम नली जोडिने भागमा पलाएको मासुको सफल शल्यक्रिया भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा रोहित यादवले बताए । शल्यक्रिया गर्न आठ घन्टा लागेको बताइएको छ । आठ घन्टा लामो शल्यक्रियापछि उनको सफल उपचार भएको बताइएको छ । श्रेष्ठको आठ दिनअघि सफल शल्यक्रिया भएको...बाँकी
काठमाण्डौंको धुलोबाट फोक्सोको क्यान्सर हुने खतरा
 डिल्ली भट्टरार्ई काठमाडौंको चावहिलस्थित हेल्पिङ हेण्ड्स सामुदायिक अस्पतालमा धुलोका कारण श्वासनली र फोक्सोमा इन्फेक्सन भएर उपचारका लागि आउने बिरामीहरुको संख्या अत्याधिक बढ्ने गरेको छ । अस्पतालका अध्यक्ष एवं जनरल फिजिसियन डाक्टर गुप्तबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ”विगतमा भन्दा अहिले दैनिक विरामीको संख्या दोब्बर हुने गरिरहेको छ, त्यो पनि धुलोका कारण मात्र । तर, काठमाडौंमा दिनप्रतिदिन बढिरहेको धुलो र त्यसको असर सामान्य मानिसले अनुमान गरेको भन्दा धेरै गुणा खतरनाक छ । यसबाट फोक्सो र श्वासनलीमा गम...बाँकी
नेपालीको स्वास्थ्यमा मोटोपन गम्भीर समस्या
संसारमै चुनौतीका रुपमा देखिएको मोटोपना नेपालमा बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष मोटोपनाको समस्या बढ्दै गएको छ । पहिले पहिले अत्यन्तै पातलो रुपमा देखिएको मोटोपनाको समस्या आजभोलि भने निकै नै जटिल रुपमा देखिन थालेको चिकित्सकहरुले बताएका छन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई हेर्दा अहिले हरेक सय जनामा १८ जना नेपाली मोटोपना सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित रहेका छन । त्यसमध्ये चार जनामा अति मोटोपनाको समस्या रहेको छ । पछिल्लो...बाँकी
आरजु जागेपछि स्वास्थ्यमा तनाब
June 14, 2017 Posted by Jhilko.com
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा भएपछि हरेक मन्त्रालयको सरुवा बढुवा र नियुक्ति तथा ठेक्कापट्टामा देउवाकी श्रीमती आरजु राणा र साला भूषण राणा जोडिन थालेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्त सचिव पदमा बढुवामा पनि सिधै देउवापत्नी आरजुले चार महिनामात्र कार्यकाल रहेकी डा. किरण रेग्मीलाई बढुवा गर्न दबाब दिएकी छिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेती अवकाश भएपछि सचिव पद रिक्त भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव बढुवाका लागि विशिष्ट श्रेणी (१२ औं तह) बाट तीन जनाको...बाँकी
चितवन । माग बढ्दै गए पनि रक्तदाताको सङ्ख्या नबढ्दा बर्सेनि रगतको अभाव बढ्दै गएको छ । युवा समुदायमा रक्तदानको महत्व बुझाउन नसक्नाले पनि बर्सेनि गर्मी मौसममा रगतको पूर्ति हुन कठिन हुँदैआएको हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सहमहामन्त्री हरि न्यौपानेका अनुसार नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा दुई लाख ३० हजार ९८६ युनिट रगत सङ्कलन गरी तीन लाख १० हजार ६२३ युनिट रगत बिरामीलाई वितरण गरिएको थियो । उहाँका अनुसार देशका ७२ जिल्लाका १०५ केन्द्र मार्फत रगत वितरण हुँदै आएको छ । हरेक वर्ष चैत अन्तिमबाट असार...बाँकी
May 21, 2017 Posted by Jhilko.com
बैतडी । गर्मी बढेसँगै बैतडीमा झाडापखालाका बिरामी बढेका छन् । जिल्लाभरिका स्वास्थ्य संस्थामा झाडापखालाका बिरामी बढी आउने गरेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । जिल्ला अस्पताल बैतडीमा आजभोलि दैनिक ३० भन्दा बढी झाडापखालाका बिरामी आउने गरेको डा दिलीप जोशीले जानकारी दिए । वैशाख महिनादेखि अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये अधिकांश झाडापखालाका बिरामी आउने गरेका छन्, उनले भने – “तीमध्ये बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन्”, अस्वस्थ खानपान र दूषित खानेपानीका कारण झाडापखालाका बिरामी ब...बाँकी
May 19, 2017 Posted by Jhilko.com
भरतपुर । निर्वाचनको कारण दुई सातायता कुनै पनि संस्थाले रक्तदानको कार्यक्रम नगर्दा जिल्लामा रगतको अभाव भएको छ । रगत आवश्यकपर्ने बिरामीका आफन्तले रक्तदाता खोज्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । क्षेत्रीय रक्तसञ्चार केन्द्र भरतपुरका प्रमुख रमेशकान्त पौडेलका अनुसार निर्वाचनको मनोनयन दर्तासँगै सबै निर्वाचनमा जुटेपछि रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना नहुँदा रगतको अभाव भएको हो । अस्पतालका बिरामीले रगत नपाएपछि भरतपुरको मनकामना अस्पतालले आज आफैले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । अस्पतालक...बाँकी
डा. श्रीभगवान ठाकुर नीम नेपालको हिमाल बाहेक प्रायः सबै ठाउँमा पाउने एउटा वनस्पती हो । जसको महत्व र उपयोगिता परापूर्वकालदेखि भइराखेकोे छ । आज पनि नीमको उपयोगिता उत्तिकै परेकोे छ जसको चर्चा दिन रात विश्वभरि मात्रै भइराखेको छ । यसको सबैे भागको उपयोगिता उत्तिकै छ । नीमको जरा, काण्ड, पात, फूल फल र बोक्रा सबै हाम्रो जीवनको कुनै न कुनै काममा प्रयोग भइ नै राखेको छ । यसको प्रयोग ससानादेखि ठूलठूला कलकारखानाले पनि गर्न थालेको छ । नीम शब्द संस्कृत भाषाको नीम्बा भन्ने शब्दबाट आएको हो । जसको अर्थ हो &ld...बाँकी
मुटु अस्पतालमा बिरामीलाई क्याथ ल्याब सेवा प्रदान
१५ वैशाख, बुटवल । गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले सञ्चालन गरेको ‘क्याथ ल्याब’बाट सुनवल नवलपरासी निवासी ५८ वर्षीय रामबहादुर नगरकोटीको पहिलो पटक एन्जियोप्लाष्टी सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ । अस्पतालका निर्देशक वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा समिर गौतम र डा मुरारी बाराकोटीलगायतको टोलीले नगरकोटीको एन्जियोप्लाष्टी सफलतापूर्वक गरेको अस्पतालले जनाएको छ । निज नगरकोटीको मुटुको एउटा नली ९० प्रतिशत रोकिएकामा एन्जियोप्लाष्टीबाट खोल्ने काम भएको अस्पतालका निर्देशक डा गौतमले जानकारी द...बाँकी
चितवन, १५ वैशाख । विगतको तुलनामा कम भाइल ‘एन्टिस्नेक भेनम’ले सर्पदंशका बिरामीलाई निको पार्न थालिएको छ । एउटा बिरामीलाई एक सय ६५ भाइलसम्म एन्टिस्नेक भेनम दिइने गरेकामा अनुसन्धानपछि ३० भेनम भन्दा बढी दिनु नपरेको पुष्ठी भएको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ । स्विजरल्यान्डको जेनेभा विश्वविद्यालयको सहयोगमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियनद्वय डा विजय पौडेल डा कालिदास अधिकारी प्राडा सन्जीव शर्मा र डा छविलाल थापासमेतले अनुसन्धानको एउटा केन्द्र भ...बाँकी